မောင် G | ကျွန်တော် မောင် G ပါ။ စာလေးပေလေး ရေးပါတယ်။
ကျွန်တော် မောင် G ပါ။ စာလေးပေလေး ရေးပါတယ်။
April 22, 2017 April 22, 2017 ~ Sithu Aung	~ Leaveacomment
အီရှိဂူရိုဟာ ကျွန်တော့်အကြိုက် ဂျပန်စာရေးဆရာပါ… မူရာကာမီထက် ပိုကြိုက်ရတဲ့သူပါ… ဒီဝတ္ထုမှာဆိုရင် အချစ်အကြောင်း အဖွဲ့ တော်တော်လေးကို ထူးဆန်းစွာ ဖွဲ့ထားပါတယ်… တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်ကြတယ်ဆိုတာကို သက်သေပြဖို့ ဝေးကွာခြင်းကို အသုံးချခဲ့ကြတဲ့ ချစ်သူတွေရဲ့အကြောင်းက စိတ်ဝင်စားစရာပါ… ခြင်ထောင်ခန်းတွေကို ဇာတ်သရုပ်ပေါ်ဖို့ လိုသလောက်ကလေးပဲ သုံးထားတာက မူရာကာမီလို အဖြူကောင်တွေ မကြိုက်ကြိုက်အောင် မလိုလည်း၊ လိုလည်း နင်းကန်ထည့်ထားသူထက် အများကြီးအဆင့်မြင့်တယ်ဆိုတာကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အီရှိဂူရိုရဲ့ ဝတ္ထုတွေဟာ တစ်ခေါက်လောက် အပျော်ဖတ်ရုံနဲ့ နားမလည်နိုင်ပါဘူး။ အထပ်ထပ်ပြန်ဖတ်မှ ဘာပြောချင်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်နိုင်တာမျိုးတွေပါ…
နိုင်ငံရေးနဲ့ဗောဇ္ဈင် ၇ ပါး
လွန်ခဲ့တဲ့လေးနှစ် ၂၀၁၃ ဇန်နဝါရီလောက်က ရေးခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးပါ။ ဗုဒ္ဓရဲ့ သန့်စင်ခြင်းတရား (၇) ပါး ဗောဇ္ဈင်တရားတွေကို ခေတ်သစ်နိုင်ငံရေးမှာ ဘယ်လိုအသုံးချနိုင်မယ်ဆိုတာကို လေ့လာထားတာ ဖြစ်ပြီး ဒီနေ့အချိန်အထိ ခေတ်မီသေးတယ်… အသုံးတဲ့သေးတယ်လို့ ယူဆလို့ ပြန်လည်တင်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗောဇ္ဈင်ဆိုတာ ဗောဓိနဲ့ အင်္ဂဆိုတဲ့ ပါဠိစကားနှစ်ခုကို ပေါင်းထားတဲ့စကား၊ ဗောဓိဆိုတာ အသိဉာဏ်။ အင်္ဂဆိုတာ စရိုက်လက္ခဏာ၊ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း… အဲဒီတော့ ဗောဇ္ဈင်ကို ဘာသာပြန်ရင် ပညာရဲ့စရိုက်လက္ခဏာတွေလို့ ပြောလို့ရတယ်… သူ့မှာ အစိတ်အပိုင်း ၇ ခုပါတယ်… Continue reading →
Donald Trump ရဲ့ အိမ်ဖြူတော်သို့ ခရီးစဉ် (Part-1)
April 17, 2017 April 22, 2017 ~ Sithu Aung	~ Leaveacomment
ဒီစာအုပ်ကို ကျွန်တော်နဲ့ တွဲရေးတဲ့ Larry Schweikart က Trump ရဲ့ အောင်ပွဲကို “အမေရိကန်သမိုင်းမှာ အံ့အားသင့်စရာအကောင်းဆုံး ရွေးကောက်ပွဲ”လို့ ပြောပါတယ်။ Larry က သူဘာပြောချင်တယ်ဆိုတာ သူကိုယ်တိုင်နားလည်တဲ့သူပါ။
Larry သည် ကောလိပ်တွေမှာ စာသင်တဲ့၊ တကယ့် အံ့ချီးဘွယ်ရာ သမိုင်းသုတေသနတွေကို လုပ်ခဲ့တဲ့၊ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး လူကြိုက်များတဲ့ သမိုင်းစာအုပ်တွေ အများအပြား ရေးခဲ့တဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သမိုင်းသုတေသီတစ်ဦး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်သူက အမေရိကန်သမ္မတတွေ၊ အထူးသဖြင့် ၁၉ ရာစုက သမ္မတတွေအကြောင်း အများအပြားရေးခဲ့ပြီး၊ အခုအခါမှာတော့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း Donald J. Trump တစ်ယောက် အမေရိကန်ရဲ့ သမ္မတဖြစ်လာစေတဲ့ အံ့အားသင့်စရာ ဖြစ်ရပ်တွေအကြောင်း သမိုင်းဆိုင်ရာ သုံးသပ်ပြတာတွေကို ကျွန်တော့်ကို ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ Continue reading →
February 28, 2017 April 22, 2017 ~ Sithu Aung	~ Leaveacomment
Benedict Cumberbatch ရဲ့ Sherlock ကို ကျွန်တော်တော်တော်လေးကို ကြိုက်ပါတယ်… သူတို့ရဲ့ concept ကို သဘောကျတာပါ… ဗစ်တိုးရီးယားဘုရင်မကြီးခေတ်၊ အက်ဒဝဒ်ဘုရင်ခေတ်တွေက နာမည်ကျော်စုံထောက်ကြီးကို ၂၁ ရာစုနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြန်အသက်သွင်းတဲ့ စီးရီးစီစဉ်သူတွေရဲ့ စိတ်ကူးကို အရမ်းကြိုက်တယ်…
အဲဒီမှာ ဘာစိတ်ကူးမိလဲဆိုတော့ ငါရောဒါမျိုးလုပ်ကြည့်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲဆိုပြီး စဉ်းစားမိလာတယ်… အရင်ကတည်းကတွေးဖူးတယ်… စာရေးတဲ့သူဆိုတာ အကုန်ရေးနိုင်ရမယ်… မရေးချင်လို့ မရေးတာသာရှိမယ်… မရေးတတ်တဲ့ စာပေအမျိုးအစားဆိုတာ မရှိရဘူးပေါ့… အချစ်၊ အလွမ်း၊ ဟာသ၊ အပစ်အခတ်၊ အညှစ်အသတ် အကုန်ရေးနိုင်ရမယ်… သေတ္တာမှောက်ကနိုင်ရမယ်ပေါ့… အဲဒီတော့ စုံထောက်စာပေမျိုး ရေးကြည့်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲ… ငါလုပ်နိုင်မလားဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် စိန်ခေါ်ကြည့်ပါတယ်… စုံထောက်ဇာတ်လမ်းရေးမယ်ပေါ့… စစချင်းတုန်းကတော့ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဇာတ်ကောင်တွေဖန်တီးပြီး ရေးမယ်စိတ်ကူးပေမယ့် Sherlock စီးရီးကို ကြည့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်လည်းပဲ ဆရာကြီးရွှေဥဒေါင်းရဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကို ပြန်အသက်သွင်းကြည့်ရင် ဘယ်လိုနေမလဲလို့ တွေးမိလာတယ်… ၂၀၁၇ ရန်ကုန်မှာ YBS စီးနေရတဲ့ ဦးစံရှားနဲ့ ဦးသိန်းမောင်ပေါ့… တော်တော်လေး မိုက်မှာပဲဆိုပြီး စိတ်ထဲတွေးမိသွားတယ်… Continue reading →
February 3, 2017 April 22, 2017 ~ Sithu Aung	~ Leaveacomment
ဆရာ K – မောင် G ကလေး ဒီဇာတာကြည့်စမ်း…
မောင် G – ဟုတ်
ဆရာ K – ဘာတွေ့လဲ
မောင် G – ၉. ၃. ၁၉၈၅၊ မနက် ၁၀ နာရီ ၂၀ မိနစ်၊ ရန်ကုန်မှာ တွက်ထားတဲ့ဇာတာပါ။ ဇာတာက ဟူးရားဇာတာ၊ ဆန္ဒနက္ခတ်က ၃၆ ပါ။ Continue reading →
ခေါင်းဆောင်မှု၏ အမှောင်ဘက်ခြမ်းအား ဖွင့်လှစ်ခြင်း
ဆောင်းပါးရှင် Barbara Kellerman ဟာဆိုရင် Harvard တက္ကသိုလ်လက်အောက်ခံ Massachusetts ပြည်နယ်၊ Cambridge မှာရှိတဲ့ John F. Kennedy School of Government မှာ Center for Public Leadership ရဲ့ သုတေသနဒါရိုက်တာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ Public policy ကို သင်ကြားပေးနေသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ University of Maryland မှာ Center for the Advanced Study of Leadership အတွက် ဒါ ရိုက်တာအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး၊ ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်ပေါင်းမြောက်များစွာကို ရေးသားခဲ့၊ တည်းဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်ကာ Bad Leadership ဆိုတဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုလည်း ရေးသားထားပါတယ်။
“ကျွန်တော်တို့တတွေက ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းတွေကို အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ ပြောနေကြတာပါ”လို့ Joan Didion က တစ်ခါတုန်းက ရေး သားခဲ့ဖူးပြီး၊ လူသားတွေရဲ့ အကောင်းမြင်ဝါဒမှာ သူ့အတိုင်းရှိနေတဲ့ ပင်ကိုသဘောသဘာဝကို ရှင်းပြခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပုံပြင်ကောင်းတွေ ဟာ ကမ္ဘာကြီးကို ပိုပြီးနေချင်စရာ ကောင်းလာစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်မတို့ဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ ပိုမိုကောင်းမွန် လာနိုင်မယ့် ဇာတ်လမ်းမျိုးတွေကိုပဲ ပြောနေ၊ နားထောင်နေကြတာပါ။ ပြဿနာက ဒါတွေကို နားထောင်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဖြေသိမ့်နေ ရုံနဲ့တော့ လောကကြီးအကြောင်းကို အပြည့်အစုံမသိနိုင်တာပါပဲ။ Continue reading →
ခေါင်းဆောင်မှုပိုင်း အကွဲအပြားများကြားမှ အပြန်အလှန်ယုံကြည်မှု၏ အခန်းကဏ္ဍ
February 3, 2017 February 3, 2017 ~ Sithu Aung	~ Leaveacomment
ယခုဆောင်းပါးဟာ HBR case study ဖြစ်ပါတယ်။ HBR Case တွေဟာ fictional ပါ။ စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေမှာ ကြုံရတတ်တဲ့ အကျပ်အတည်း (dilemmas) တွေကို နမူနာယူ တည်ဆောက်ထားပြီး ကျွမ်းကျင်သူတွေအနေနဲ့ အဖြေတွေ၊ ခန့်မှန်းချက်တွေ ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ လုံလောက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ နမူနာဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကို အရင်ဆုံးပြောပြပါမယ်။ ပြီးတော့မှ ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ စီးပွား ရေးနယ်ပယ်က ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို ပြန်လည်တင်ပြပါမယ်။
Ed Davidson က Davos ကို ရောက်နေတယ်။ အဲဒီမှာတင် သူ့ CEO က သူ့ကို ဥက္ကဋ္ဌရာထူးအတွက် အမည်မတင်သွင်းပေးဘူးဆိုတာကို သိလိုက်ရတယ်။ ဒါပေမယ့် Ed ရဲ့လက်ထဲမှာက CEO ရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကို မှေးမှိန်သွားအောင် လုပ်နိုင်တဲ့ မသမာတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်က လည်း ကိုင်ထားတယ်။ ဆိုတော့ သူ့အလုပ်အတွက် ဒီအချက်ကို အသုံးချလိုက်သင့်သလား။ ဒါကဒီနမူနာဖြစ်စဉ်အတွက် မေးခွန်းပေါ့လေ။
ကဲ… ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။ Continue reading →